ဤသူသည် WordPress ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုတည်ဆောက်နိုင်သလား?! | Martech Zone
ဤသူသည် WordPress ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုတည်ဆောက်နိုင်သလား?!
သောကြာနေ့, ဧပြီ 20, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ blogging လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Sean သည်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်အနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူထပ်မံပါ ၀ င်နေသည် - Laptop နှင့်အတူ Geek။ ဤသူသည် WordPress အသားအရေကိုတစ်ပုံစံတည်းတည်ဆောက်သည်။ WOW!
ဟုတ်တယ်၊ အကြောင်းအရာကသိပ်မဆိုးဘူး။ 😉
Thunderbird ရောက်ရှိ တချို့အသွင်အပြင်တွေကလူသတ်သမားဖြစ်တယ်၊ တချို့ကိုသတ်ပစ်သင့်တယ်။
သင်၏လျှောက်လွှာကိုတိုးတက်စေရန် APIs များကိုအာရုံစိုက်ပါ (Del.icio.us နှင့် Technorati)
ဧပြီ 20, 2007 မှာ 2: 11 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၌အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအတွက်နေရာအနည်းငယ်ရရန် CSS အသေးစားစတိုင်လ်အနည်းငယ်ရှိသေးသည်။
ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်း, ငါမကြာသေးမီကဒီဇိုင်းအသစ်ပြုခဲ့ကတည်းကငါသည်လည်းတစ်ထစ်တက်ကန်သင့်ပါတယ် ... hehe 🙂
ဧပြီ 20, 2007 မှာ 2: 19 pm တွင်
wow ကောင်းတယ် ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ WordPress themes များလောကသို့ငါတူးနေပြီ။
ဧပြီ 20, 2007 မှာ 5: 50 pm တွင်
wordpress themes များ (အကောင်းတကာ့သောအချက်များ) သည်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဝီကီတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဝဘ်ပညာရှင်များအတွက်စတင်သောကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။
ဧပြီ 20, 2007 မှာ 10: 55 pm တွင်
လုံးဝမကောင်းဘူး! ဒါဟာငါ့အကြည့်ပို။ ပင် Bland စေသည်။ ကောင်မလေးငါလုပ်ဖို့အလုပ်အချို့ရှိသည်!
ဧပြီ 21, 2007 မှာ 12: 43 AM
@Thor: WordPress ဒီဇိုင်းအသစ်ကိုသင်လိုချင်လျှင် (သို့) လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီရနိုင်သည်။ am